बलिउड स्टारः कसको शैक्षिक योग्यता कति? - Everest Dainik - News from Nepal
बलिउड स्टारः कसको शैक्षिक योग्यता कति?
काठमाडौं, चैत १३ । अहिले भारतमा १० र १२ कक्षाको बोर्ड परीक्षा चलिरहेको छ । आफ्नो करियर बनाउनकै लागि छात्रछात्राहरूले मिहेनत गरिरहेका छन् । तर भारतका फिल्मी क्षेत्रका कतिपय कलाकारहरूले विद्यालय नै गएका छैनन् भने कतिपयले फेल भएपछि शिक्षालाई निरन्तरता दिएका छैनन् ।
बलिउडका स्टार कलाकारहरू विद्यालय नै गएका छैनन् र कलेजमा पढेकै छैनन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, उनीहरूले अध्ययनतर्फबाट भन्दा पनि कलाकारीता क्षेत्रबाटै आफ्नो उच्च पहिचान बनाएका छन् ।
आमिर खान– खान २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि फिल्मी क्षेत्रमा छन् । उनले कुन विद्यालयमा कहिले र कति पढे भन्ने रेकर्ड छैन । एक टेलिभिजन च्यानलसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले विद्यालयसँग आफ्नो कुनै नाता नरहेको बताएका छन् ।
सलमान खान– सिंधिया स्कुल ग्वालियर र सेन्ट स्टीन्सलाँ स्कुल मुम्बइपछि उनले नेश्नल कलेज मुम्बइमा भर्ना भए । तर त्यसपछि उनी कलेज गएका छैनन् । सलमानले माध्यमीक शिक्षासम्म अध्ययन गरेका छन् ।
अर्जुन कपुर– अर्जुन पनि १२ कक्षा फेल भएका अभिनेता हुन् । बलिउडमा जमेका उनी उच्चशिक्षामा भन्दा पनि फिल्मी क्षेत्रमा बढी लगाव भएका कलाकारमा पर्दछन् । यो समाचार लोकान्तर डटकमबाट साभार गरिएके हो ।
ट्याग्स: bollywood actors